विदेशमा सम्पत्ति राखे कारवाही, बिदेशमा रहेको सम्पति फिर्ता गर्न सरकारले चाल्यो यस्तो कदम ! « Etajakhabar
विदेशमा सम्पत्ति राखे कारवाही, बिदेशमा रहेको सम्पति फिर्ता गर्न सरकारले चाल्यो यस्तो कदम !
प्रकाशित मिति : २ माघ २०७६, बिहीबार ०९:०६
सरकारले मुलुकभित्र विभिन्न माध्यमबाट आर्जन गरेको चलअचल सम्पत्ति फिर्ता गर्ने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनको तयारी गरेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । मुलुकभित्र भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा राख्ने गरेको चर्चा चलिरहेका बेला सरकारले विदेशमा राखेको सम्पत्ति फिर्तासम्बन्धी कारवाही चलाउने व्यवस्थासहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा ल्याएको हो ।
भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा रहेको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति पहिचान गर्ने, रोक्का गर्ने र फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा पारस्परिक समझदारी वा सन्धिको आधारमा नेपाल सरकारमार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा थप गरिउको छ । ऐनको दफा ६० को ६० (क) मा नयाँ प्रावधान राखिएको छ । विदेशमा रहेको सम्पत्ति फिर्तासम्बन्धी कारबाहीको व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुकूल बनाउन सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेमा रकमअनुसारको सजाय पनि तोकिएको छ ।
सो पत्रिकामा ‘घरको कौसीमै गाँ’जा’खे’ती’ शीर्षकमा पनि समाचार छ । ललितपुरको प्रयागपोखरीस्थित पाँचतले घरको कौसी र छतभरी गाँ’जाका बोट हुर्किएको पत्तो पाएपछि कात्तिकको पहिलो साता प्रहरी घरभित्रै पसेर छापा मा-यो र गाँजा फाँ’ड्यो । लगत्तै २२ केजी गाँ’जासहित घरधनी भूषणकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । त्यसयता प्रहरीले घरका कौसी र छतमा समेत निगरानी बढाउन थालेको छ ।
लाँकुरीभञ्ज्याङ क्षेत्रमा ५ सय रोपनीभन्दा बढी जमिनमा गरिएको गाँ’जाखेती प्रहरी परिचालन गरी जलाइयो । ग्रामीण क्षेत्रमा लुकिछिपी गाँ’जा खेती गरिने भएपछि प्रहरीले ललितपुर मात्रै नभएर उपत्यकाभर गाँ’जाखेती र ओसारपोसारबारे निगरानी बढाएको छ । यसक्रममा ललितपुर मात्र नभएर भक्तपुरको नगरकोटा क्षेत्र, काठमाडौँको साँखु, चन्द्रागिरीलगायत क्षेत्रमा पनि गाँ’जा खेती गरेको भेटियो । प्रहरीका अनुसार उपत्यकामा गाँ’जा खेती गरिएका ठाउँमै पुगेर नष्ट गरे पनि अन्य लागुपदार्थको सेवन र कारोबार बढेको छ । उपत्यकाभित्र ला’गुप’दा’र्थसम्बन्धी दैनिक पाँचभन्दा बढी घटना हुने गरेका छन् ।